Urisho, ukuthuthwa kwemveli kwamaTshayina | Ukuhamba kwe-Absolut
Urisho, ukuthuthwa kwendabuko kwamaTshayina
daniel | | iTshayina
Kumazwe oMzantsi noMpuma Asia, ukusuka eIndiya ukuya eTshayina, indlela yesiko yezothutho eyaziwa njenge Uritsho.
Ngokusisiseko, le ndlela ikhethekileyo yothutho luhlobo lwamavili amathathu enamavili amathathu aphethwe ngumntu omnye. Uguquko loyilo lwantlandlolo, oluquka inqwelo elula eyenziwe ngomthi etsalwa ngumntu ngeenyawo.
Namhlanje nabani na ohamba aye kwezona ndawo zemveli zabakhenkethi kwindawo enkulu yaseAsia uya kuba nakho ukubona uninzi lwezi zithuthi. Vula Beijing umzekelo, apho uritsho waziwa nje ngokuba ibhayisekile-iteksi. Amakhulu ezi zithuthi ahamba kwizitalato zelizwe elikomkhulu lase China yonke imihla, evavanywa ngabaqhubi abasebenza nzima kunye nabaqhubi abaziingcungcu abangena uloyiko lokujikeleza kwesixeko.
Ayisiyiyo eyona ndlela intofontofo okanye ekhawulezayo yokujikeleza isixeko, kodwa abakhenkethi bayabathanda.
El xabiso Ukukhwela i-rickshaw yeyure enye malunga ne-30 yuan (malunga nee-euro ezingama-4 ngoku kutshintshiselana ngoku). Kwezinye izixeko zelizwe, ezinje nge Hangzhou o Shenzhen, amaxabiso abiza ixabiso eliphantsi.
1 Imbali yeerickshaw e China
2 Ukutyelela iBeijing kwindawo erula
Imbali yeerickshaw e China
"I-rickshaw yaseTshayina" yathandwa njengeyona ndlela yokuhamba isetyenziswa ngabantu abatyebileyo baseTshayina ngasekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX. Umsebenzi womqhubi (nangona ingachaneka ngakumbi ukuyibiza ngokuba "yi-shooter") kwezi moto kunokubonakala kunzima kuthi, kodwa bekunje nangaphezulu kumaxesha adlulileyo, xa izityebi nabanamandla babethuthwa ngeebhanka.
Iimodeli zokuqala zaqala ukujikeleza e-China ngo-1886. Kuphela kwishumi leminyaka kamva ukusetyenziswa kwazo njenge Izithuthi zikawonke-wonke yaba ngokubanzi. Urisho lwaluyinto ebalulekileyo kuphuhliso lwedolophu yase China ngenkulungwane yama-XNUMX. Ayisiyiyo kuphela into yokuhamba, kodwa ikwakhona njengendlela yokuziphilisa ngamawakawaka abantu.
Ababhali-mbali baqikelela ukuba malunga ne-1900 eBeijing kuphela zimalunga nama-9.000 ezi moto ezijikelezayo, eziqeshe abantu abangaphezu kwama-60.000. Eli nani alizange liyeke ukukhula, lafikelela kwi-10.000 XNUMX phakathi kwinkulungwane.
Nangona kunjalo, yonke into yatshintsha emva kwemfazwe kunye nokunyuka kwamandla UMao Zedong. Kumakomanisi, urisho lwalungumfuziselo wengcinezelo yongxowankulu babasebenzi, ke ngoko babasusa ekuhambeni Wavala ukusetyenziswa kwayo ngo-1949.
Ukutyelela iBeijing kwindawo erula
Ooritsho abahamba kwizitalato zase China namhlanje abasatsalwa yindoda ngeenyawo, kodwa ngumqhubi ngebhayisekile. Kusenzima ukusebenza, nangona kungenzima njengangaphambili.
En Beijing Kufanelekile ukwahlula phakathi kooritsho ababonelela ngenkonzo efanayo neteksi kunye nezo zinikezelwa kubakhenkethi njengendlela entle yokundwendwela izikhumbuzo eziphambili zedolophu. Ngale ndlela ezi Ooritsho abakhenkethi bangena kwifayile ye- hutongs, ii-alleys zelona candelo lidala kwikomkhulu laseTshayina.
Amava anzima, nangona kubalulekile ukuba umhambi azi izinto ezimbalwa ngaphambi kokungena kwenye yezi zithuthi.
Ukuqala, kuya kufuneka uyazi thenga ixabiso. Abaqhubi abaninzi baya kuzama ukusinyanzela ukuba sihlawule ukuya kuthi ga kwi-yuan ezingama-500 (ngaphezulu kwama-euro angama-60) ukukhwela iyure enye, yimali eninzi kakhulu leyo. Ukuba sime siqinile kwaye siyayazi indlela yokuthintela, ixabiso ekuvunyelwene ngalo linokwehliswa liye kwi-80 yuan, okanye nangaphantsi.
Enye into ekufuneka uyazi kukuba umqhubi uya kuma kwivenkile yomhlobo okanye yesihlobo. Umbono kukuba abagibeli bachitha imali ethile ngaphambi kokuba baqhubeke nendlela yesixeko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Urisho, ukuthuthwa kwendabuko kwamaTshayina
Izakhiwo ezi-5 ezidumileyo eMelika
Iindawo ezikwiHoneymoon eMelika